Raa’iisulwasaare kheyre oo daahfuray imtixaanadka shahaadiga Dalka | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Raa’iisulwasaare kheyre oo daahfuray imtixaanadka shahaadiga Dalka
Raa’iisulwasaare kheyre oo daahfuray imtixaanadka shahaadiga Dalka
Ra”iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta daah furay Imtixaanaadka Shahaadiga ah ee dalka oo ay maanta u fariisteen 27,600 oo arday Soomaaliyeed.
iskuulka 15-ta May oo ka mid ah iskuulada dalka oo ay ka socdaan imtixaanaadka Shahaadiga dalka ayaa imtixaanaadkaasi waxaa daahfuray raa’iisul wasaaraha dalka, iyadoona si weyn loo adkeeyey amniga ayaa waxaa gaaray Ra’iisul wasaaraha dalka oo ay wehliyaan guddoomiyaha gobolka Benaadir iyo wasiirka waxbarashada Soomaaliya.
Mudane Xasan Cali Kheyre oo ka hadlay daah furka Imtixaanaadkaasi ayaa sheegay in waxbarashadu ay tahay qeybta ugu muhiimsan ee horumarka dalka.
“Waxaan u mahad celinayaa Aabayaashii iyo Hooyooyinkii kasoo shaqeeyey in caruurtooda ay soo gaarsiiyaan halkaan, Inagana ka dowlad ahaan waxaan ku dadaali doonaa insha allh si arday walbo uu fursad u heli lahaa”ayuu yiri Mudane Xasan Cali Kheyre.
Ra”iisul wasaaraha dalka ayaa sidoo kale u mahad celiyey cid waliba oo howshaan kasoo shaqeysay, gaar ahaana wasaaradda waxbarashada dalka.
“Waa Iftiin qaranimo Soomaaliyeed ay ka muuqato, Waa Horumar uu wadankeenu ku tilaabsanayo, waxeyna ahaan doontaa howlaha saldhiga u ah xukuumada iney ka shaqeyso”ayuu hadalkiisa sii raaciyey Ra”iisul wasaaraha Soomaaliya.
Imtixaanaadka shaadiga oo maanta ay u fariisteen ardayda soo dhameysay dugsiyada sare ee dalka ayaa socon doono mudo 5 Maallin ah.
Previous articleimtixaankii Shahaadiga Dalka oo maantay Furmay.
Next articleGuddomiya-yaasha aqalka sare iyo golaha shacbiga oo qaabilay wakiilka midowga Africa